Yini izivakashi e Tula? Lo muzi hhayi smart elikhanyayo, uklanyelwe ukuba umxhwele ezinjalo. Lapha, konke ngendlela ekhethekile manje, lasendulo, wenza amakhulu eminyaka. Njalo emgwaqweni, cosiness ekhethekile esiyitholayo zonke esakhiweni. Akumangazi, kusukela ngekhulu XIV, idolobha wahlanganyela yezandla. Lapha sisuke riveting samovars omangalisayo futhi isikhali esihle. Ukuze simazi kangcono umsebenzi amakhosi amakhulu, lapha izivakashi hamba. Buka izikhali Museum, ukukhothamela lesi esihle, feat izikhali, ukuthenga Gingerbread abadumile, vakashela izindlu Lva Nikolaevicha Tolstogo, nje salokhu lapha ukuza. Futhi ukuze ukulala, ihhotela "Compound" ukulingana kahle. Tula - edolobheni ithakazelisa kakhulu, ungathola kangcono umlando wezwe lethu kanye bajabulele ezitaladini ubudala.
Yini ukuhlobanisa igama? Endaweni yokuqala, nge ethokomele, amapulazi nabalimi abancane, lapho zonke izimenywa ekuseni kuyakhexisa nge scones fresh futhi ubisi olufudumele. Naphezu kweqiniso lokuthi leli hhotela "Compound" (Tula) Itholakala enkabeni yedolobha, kukhona njalo Akumangalisi ethule. Izivakashi kuyakhexisa udondolo friendly ukuthi Uhlale ekulungele ukusiza nge ukukhishwa noma yisiphi isicelo.
Namuhla-ke ingenye okukhethwa best for izivakashi emzini. Ihhotela "Compound" (Tula), inikeza yokuhlala ethokomele nge yokugezela yangasese. Ukuze izivakashi kukhona yokupaka free, okuyinto ekahle kakhulu abashayeli. amakamelo Classic ukwenza ehhotela jikelele ngokuphelele. It inikeza free Wi-Fi. Ihhotela "Compound" (Tula) balindelwe izivakashi zayo nganoma isiphi isikhathi sosuku noma ebusuku. On-site ubusuku nemini phambi edeskini lapho umlawuli angajabula ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Ngisho nangaphambi kokuba ucingo emzini, kubalulekile ubhukhe igumbi, lapho uyeka ebusuku. Uma okukhethayo kwaba ehhotela "Compound" (Tula), ikheli kungaba ukubadlula kumephu ukuze Orient wena kungabikho izinkinga. Itholakala iseduze ezibiyele, main indawo mlando, avame ukuvakashela zonke izivakashi. Futhi ngingabalahla kanjani kube ngenye indlela, ngoba kuyinto lesikhumbuzo oluvelele bokwakha Russian kwekhulu XVI. Ikheli ngqo: emgwaqweni Zhukovsky, 9 ..
ukudluliselwa Private kusukela ehhotela lapho, kodwa, isimiso, wayengabi nayo ngisho udinga lapha. Ngokwanele ukuze ube ibalazwe Ukugunda noma itilosi. Uma bengekho ukuthi, bayeke yimuphi umshayeli wetekisi futhi ukubuza lapho Zhukovsky emgwaqweni. Bazakunazisa indlela okufanele sihambe ngayo noma uthatha ibhasi. Kusukela esiteshini sesitimela nazi amatekisi inombolo 12/15, futhi 16/10. Kungenjalo, ungakwazi ukusebenzisa inombolo ibhasi 13 futhi phuma esitobhini "emgwaqweni Pirogov". Okulandelayo kuyodingeka bahambe ibangana. By endleleni, ungakhohlwa uvakashele ukubhuka. Kubalulekile ukuthi uthole indawo ehhotela "Compound" amancane, kodwa ethandwa kakhulu (Tula). Phone 7 (4872) 38-57-58, umlawuli uzathatha izingcingo ubusuku nemini.
Isikhathi esining impela, izivakashi isabelomali bazikhethele ihhotela emaphethelweni umuzi, ngoba amanani ngakho ephansi kakhulu. Nokho, uma ukhetha "Compound", akudingekile ukufuna ukusilela. Okokuqala, kungenxa enkabeni yedolobha. Okwesibili, Ihhotela likuvumela izivakashi zayo i amakamelo okungabizi kodwa ukhululekile futhi isevisi enobungane. Yini enye ongabuye uyifune? Isigaba "Umnotho" - kuyinto amakamelo olulodwa noma kabili endaweni 13 m 2. Akukho lutho engadingekile, imibhede olulodwa eyodwa noma ezimbili, eliseceleni kombhede amatafula nezihlalo. Indlu yangasese has a eshaweni, usinki yangasese. izindleko zokuqasha nsuku zonke ruble 1,700, kanye ibhulakufesi akufakwanga ke. Kodwa ngaphakathi ukuhamba ibanga zokudlela ezinkulu, phakathi lapho ofanele kakhulu ingakhethwa.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, amakamelo futhi ikhishi elincane elalinesitofu, ngeketela bese iqoqo ubuncane izitsha. Ngakho-ke, ungase wenze kahle kwezinsuku ezimbalwa izitsha self-ezenziwe bese ugcine ku yokudlela.
Njengoba iklanyelwe i-izivakashi ezimbili. Lokhu kuyisinqumo esingcono kakhulu, futhi elifuna ukusizakala kakhulu yizivakashi ezivamile. Ngokuvamile, "Compound" - lena engcono kuzo zonke izici. Lesi sikhungo edolobheni, kodwa lo mgwaqo endaweni ethule ukuze ephelele ukuzilibazisa inkohliso emzaneni. Kuyathakazelisa kakhulu ukuhamba kusihlwa. Izindlu emgwaqeni ongaphakeme futhi iningi labo lokhuni. Kodwa kubalulekile ukuze ujike eSoviet, futhi uku kombuso ukhonkolo, ephezulu liphumele izakhiwo kanye Indathane izimoto.
Ngakho ake ubuyele emuva inombolo yethu. Inama a double embhedeni, eliseceleni kombhede amatafula, Ikhishi, efrijini naku-TV. Esikhathini yokugezela, okufanayo isethi edingekayo, eshaweni, yangasese, usinki umshini wokomisa izinwele. Igumbi ubukeka olukhuni, kodwa ngesikhathi esifanayo yesimanje kakhulu. Wayengumuntu ivulekile, elikhanyayo futhi inomsebenzi edeskini ezinkulu. Futhi-ke, yamjabulisa ekhishini lalo. Kukhona ikhabethe ne iziphanyeko, ngakho beka izingubo, ngeke kube nzima. Inani lokuqasha ruble 2200 ngosuku.
Uma udinga ezinhle ehhotela Tula ezishibhile, qiniseka ukuthi sinake "Compound". Kuyinto indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo ukuze umbhangqwana noma usomabhizinisi. Okuwukuphela ezimbi, okuyinto lugujwa izivakashi - ukungabi khona e-room ephephile. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abaningi bayenqaba Igumbi yokuhlanza amasevisi, ukukhathazeka mayelana ukuphepha izinto zabo ngesikhathi ukungabikho. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi labantu siyohlale nokuhlanzeka ephelele, ngakho ezinsukwini ezimbalwa, ungenza ngaphandle kokuphazanyiswa ngaphandle.
Sakusihlwa ehhotela lapho, kodwa for imali eyengeziwe ongakunika ibhulakufesi. Pheka ke kwelinye amathilomu eseduze futhi ngikukhulule ekamelweni lakho. Ayikho lezitsha, nje ukukhetha izitsha eziningana: amaqanda ethosiwe, iphalishi, Pudding. Izindleko ruble 200 umuntu ngamunye.
Eqinisweni, kungcono ejwayelekile aphakeme. Lezi amakamelo zifana, kodwa kukhona izinketho ezingeziwe. Ikakhulukazi, air conditioning ne control sezulu uhlelo, ekhishini has a hood, okuzokwenza ukulungiselela nge Izinsiza ezinkulu. Esikhathini yokugezela uzothola uhla egcwele imikhiqizo inhlanzeko yomuntu siqu, amathawula kanye dryer izinwele.
Uma ukwakha nozakwabo yezinkulumo, kulomhlangano noma ukuqeqeshwa, kuba ehhotela kumelwe Tula ezishibhile. Ihhotela "Compound" Luhle le njongo. Kuyinto elula ukuze ungathola kuphi emzini. Le ndawo ethulile kakhulu, lutho ngeke zikuphazamise ekuxazululeni izinkinga ngokushesha.
Ihhotela likuvumela zonke izimo ibhizinisi ukuba imihlangano yebhizinisi. Kuqashwa ikamelo umhlangano ethokomele ifakwe ubuchwepheshe bamuva. Modern air-conditioning system uzokunika induduzo kuwo wonke ukuhlala. Izivakashi zamukelekile ukuba usebenzise demo ibhodi, umshini wokudlala amabhayisikobho kwesikrini, laptops ekhishwe njengoba kudingekile. Ilokhu usebenza ngesivinini internet.
Kuyinto engenakwenzeka umbono ophelele, ngaphandle kokwazi emibonweni yalabo abaye kakade lapha. Yini wawubonakala ungacacisi kubo ehhotela "Compound" (Tula). Izibuyekezo zinhle kakhulu, ngisho ngesisekelo lesi Ngifuna ukuncoma ke bonke izivakashi edolobheni. Phakathi izinzuzo ikakhulu baziswa intengo nendawo, libanzi futhi amakamelo yesimanje. Ideal for the ibhizinisi njengoba indawo izingqungquthela kanye nezingxoxo. Kodwa futhi izivakashi abavamile ke kuyasithakazelisa. Uma unesithakazelo emlandweni futhi ufuna ukuvakashela Manor ubudala "Yasnaya Polyana", noma nje sizulazule endaweni, qiniseka banake "Compound". Ungathanda ukuthatha uhambo ngokusebenzisa enkabeni yedolobha noma ukuya ukudlula lokho, akunandaba, konke eliseduze.
Endaweni ehlukile, umsindo impendulo efudumele kubaPhathi. Ngisho emnyango wena wahlangana yizisebenzi nobungane abamamukela Uhlale ekulungele ukusiza ngokusekela futhi zikhiphe lapho kudingeke khona. Ihhotela ngokwaso yintsha, ahlanzekile, inakekelwa kahle futhi elikhanyayo kakhulu, ufuna buya lapha kaningi.
Isikhathi esigcwele - kunjani? Yini eyenza ihluke singesihambelanayo